Dreame D9 Max, falanqaynta mashiinka nadiifiyaha waxqabadka sare ee ugu dambeeyay | Warka gadget
Nadiifiyeyaasha Robot-ku waxay noqdeen mid ka mid ah "qasab" guryaha sida aadka ah ula qabsaday tignoolajiyada ugu dambeeyay. Kuwaasi waxa ay sameeyeen horumar la taaban karo iyo horumar la taaban karo oo dhinaca waxqabadka iyo natiijooyinka ah kuwaas oo u beddelay xubno madax-bannaan oo ku dhow kuwaas oo nolol maalmeedkeena ka dhigaya mid aad u fudud.
Markan Aniga ayaa igu riyooday ma seegi karo ballanta, oo bixisa tiro wanaagsan oo xalal ah oo qiimo fiican u leh lacag ee noocyadan tignoolajiyada ah. Waxaan falanqeyneynaa Dreame D9 Max cusub, nadiifiyaha vacuum ee robot oo leh waxqabad sare iyo natiijooyin wanaagsan, Nala soo ogow oo waxaad awoodi doontaa inaad miisaanto inay runtii u qalanto iibsashadaada, iyo in kale.
3 Madax-bannaanida iyo codsiga
4 Tignoolajiyada la isticmaalo iyo ra'yiga tifaftiraha
Sida munaasabadaha kale iyo inta kale ee alaabteeda, Dreame waxay calaamad u tahay isbeddelka naqshadeynta waxayna dhistaa tayada alaabteeda iyada oo la tixgelinayo kuwa kale, iyada oo hubinaysa in qiimaha la hagaajiyay aan la dareemin tayada. Waxaan wajahaynaa nadiifiyaha vacuum-ka ee robot-ka oo leh saamiga suuqa caadiga ah, oo ku sharmaaya cabbirrada 35 × 9,6 oo noqon doona qiyaastii 3,8Kg, Inkasta oo ay run tahay in ereyada miisaanka ee qalabkani aanay aad u khusayn, maadaama aynaan qaadin. Qiimaheedu waxa uu ku wareegayaa 299 yuuro meelaha ugu muhiimsan ee iibka. Sidoo kale haddii aad rabto qiimo dhimis dheeri ah waxaad isticmaali kartaa kuubanka DREAMED9MAX.
Cabirrada: 35 × 9,6 sentimitir
Miisaanka: 3,8 Kg
Midabada la heli karo: Madow dhalaalaya iyo caddaan dhalaalaya
Faaqid iyo xoqid la isku daray
Waxay leedahay buraashka dhexe ee la xoojiyay ee hoose kaas oo isku daraya teknoolajiyada kala duwan, iyo sidoo kale burushka hal dhinac ah. Xagga sare waxaan ka helnaa saddexda badhamada gacanta ee muhiimka ah, kan hadda caadiga ah ee "hump" ay ku rakiban yihiin dhammaan robots-yada leh tignoolajiyada laysarka iyo hagaajinta haanta biyaha. Dhankeeda, haanta wasakhdu waxay ku taallaa albaabka gadaashiisa ee aagga sare, halkaas oo ay inta badan ku yaalaan labadaba Roborock iyo Dreame si joogto ah. Sida aad ka arki karto sawirada, waxaan ku falanqeynay qaabka madow.
Dhanka baakadaha, Dreame inta badan waxay si fiican u shaqeysaa qaybtan, Siinta munaasabaddan waxyaabo fudud laakiin lagama maarmaanka ah: Qalabka, saldhigga dallaca iyo sahayda korontada, burushka dhinaca, haanta biyaha ee xaaqin ay ku jirto, qalabka wax lagu nadiifiyo (gudaha robot-ka, meesha haanta qashinka) iyo buug-gacmeedka. Waxa aan seegay shay beddelka ah sida xaaqin badan, filtar beddelka ama burushka dhinaca beddelka ah.
Qalabku wuxuu leeyahay isku xirnaan Wifi, laakiin sida caadiga ah waxay ku dhacdaa qalabkan, waa in aan maskaxda ku haynaa in ay noqon doonto mid ku habboon oo kaliya oo leh shabakado 2,4GHz ah. Taasi waxay tidhi, waxaan helnaa nidaam nLDS 3.0 Laser LiDAR Navigation si hufan, kaas oo ay la socon doonto kaaga 570ml oo kayd wasakh ah iyo 270ml oo biyo ah ama dareeraha nadiifinta ee aan rabno inaan bixinno, ilaa iyo inta ay ku habboon tahay labadaba aaladda iyo sagxadayada su'aasha, wax ay tahay inaan la tashano buug-tilmaameedka hore.
Dhanka awoodda nuugista, Dreame ayaa ka warbixisay nooca 4000 ee Pascal pro model, awood si cadaalad ah u sareysa oo hufan iyadoo la tixgelinayo isbarbardhigga alaabada kale ee noocyada xafiiltanka ugu fiican. Iyadoo la tixgalinayo in awooda nuugista waxaynu heli doonaa dhawaqyo la sii daayay oo u dhexeeya 50db iyo 65db, Taas oo sidoo kale ka dhigaysa mid aad u aamusan oo nadiifiyaha robotka ah haddii aan ku xisaabtano qaybtan gaarka ah. Sawaxanku waxay ku xidhnaan doontaa halkii afarta heer ee awoodeed ee aynu ku maarayn karno codsiga.
Madax-bannaanida iyo codsiga
Qorshee wadooyin caqli badan
Samee maab gaar ah
Nadiifi qolal gaar ah
Nadiifi meelaha aad jeceshahay
Mamnuuc in la galo meelo gaar ah
Waxaan haynaa, sidee bay noqon kartaa haddii kale, la mid ah Amazon Alexa, Markaa maalinba maalinta ka dambaysa way fududaan doontaa haddii aan si fudud u waydiino kaaliyahayaga farsamada gacanta ee shaqada ku jira. Shaqada isku xidhka iyo maaraynta aaladda waxa lagu fulin doonaa codsiga Mi Home ee labadaba diyaar u ah Android sida macruufka. shaqayn doona xitaa marka aan guriga joogin. Mahadsanid casrigayaga iyo App-kayaga, Waxaan xakameyn karnaa nadiifinta guriga meel kasta, gelitaanka khariidadda iyo maaraynta meelaha nadiifinta.
Tignoolajiyada la isticmaalo iyo ra'yiga tifaftiraha
Waxaan ku kulannaa Dreame D9 Max Farsamooyinka ugu muhiimsan ee Dreame ay u qaabaysay noocyadan alaabta, sida a nidaamka xakamaynta qoyaanka si loo maareeyo biyaha loo isticmaalo nadiifinta oo aan waxyeello u geysan parquet, iyo sidoo kale nidaamka nuugista caqliga leh Kordhinta Roogga kaas oo ka sooci doona roogagyada iyo sagxada adag si loo xakameeyo xoojinta faakuumiyaha.
Waxaa ku jira shaandhada HEPA oo waxtarkeedu sarreeyo.
Waayo-aragnimadayadu waxay ahayd mid aad u wanaagsan marka loo eego faakiyuumka, oo leh awood, iyada oo aan buuq lahayn iyo dariiqyo wanaagsan oo loogu talagalay iskaanka LiDAR, sida had iyo jeer, xoqiddu waxay ka badan tahay xaaqin qoyan oo xaaladaha qaarkood waxay abuuri karaan calaamadaha qoyaanka ee dhulka iyada oo ku xidhan walxaha ka kooban, markaa waxaanu kugula talineynaa inaad la tashato soo saaraha. Waxaad ku heli kartaa qiimo u dhexeeya 299 euro oo leh dalabyo gaar ah, adoo noqonaya ikhtiyaar caqli gal ah marka loo eego saamiga tayada / qiimaha.
Ku dhejiyay: December 30 ee 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: Janaayo 4 ee 2022
Khariidaynta smart iyo hufnaanta sare
Awood nuugid wanaagsan
Sawaxan hooseeya iyo natiijooyin wanaagsan
xoqiddu mararka qaarkood waxay ka tagtaa calaamado
Waxaa maqan in ay ku jiraan waxyaabo dheeraad ah oo lagu beddelo
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Dreame D9 Max, falanqaynta faakuum nadiifiyaha ugu dambeeyay ee waxqabadka sare ee robot